Ngithenga i-Gold and Silver Repair ne-Resale OroPazzo Catania
Kuvaliwe: NgeSonto (ngaphandle kwenyanga kaDisemba)
Ukutholakala kolwazi amahora angama-24
Thenga i-Gold and Silver Repair bese u-Resale OroPazzo
I-Ori e Preziosi yokuba nezinto eziyigugu ngamanani aphansi kakhulu.
4.4 /5 amavoti (amavoti angama-5)
Igolide Elihlanyayo, nebhizinisi layo le Ngithenga igolide nesiliva, isitolo sokuthenga nokuthengisa izinto eziyigugu ku oro e esiliva iyasebenza a Catania iminyaka engaphezu kwengu-30 ku umkhakha wabakhandi begolide. Ibuye inikeze imisebenzi ye- ukulungisa e ukuthengiswa kwegolide elibuyisiwe.
I-OroPazzo: Thenga iGolide neSiliva eCatania lapho ungathengisa khona futhi uthole izinto eziningi eziyigugu zenani elikhulu
Ukuhweba, Ukulungisa e Ukubuyiselwa Kwegolide Kubuyiselwe: nazi ezinye zezinsizakalo ezinikezwa ochwepheshe abakhandi begolide ekuqondiseni kwe Igolide Elihlanyayo. Isitolo siyasebenza Catania kusukela ngo-1991 lapho iqinisekisa khona i- a Ikhotheshini yansuku zonke enembile futhi esobala. Intengo ye- ukushintshaniswa kwegolide empeleni, kuqinisekisa ukuhlolwa okuphelele kwansuku zonke ngokuqonda, ngenhlonipho nangobungcweti. Labo abafuna indlela yokwenza imali ngemizuzu embalwa ngokuthengisa ezabo oro eCatania, inesixazululo esiseduze ngenxa yalesi sikhungo. Izitsha zingena esiliva, izindandatho, elengayo, namacici, izinkomishi zegolide o isiliva nezinye izinto eziyigugu eziningi ziphakathi kwezinto ongaziletha esikhungweni ukuze ube nokuhlola okuvuselelwa njalo kwikhotheshini yansuku zonke oro e isiliva.
Da Igolide Elihlanyayo uzoba nethuba lokuthenga gioielli zazo zonke izinhlobo, zombili zasendulo nezanamuhla. Inike izindandatho zegolide kulabo abanamatshe ayigugu, wozani namasongo esiliva kulabo abaphakathi oro, kusuka emigexo efakwe elengayo kuya kumacici: okwethu Ngithenga igolide unikela ngemikhiqizo ye- ubucwebe obuphakeme. Isikhungo, ngaphansi kokuqondiswa kwe-umkhandi wegolide U-Erminia Ventura naye wenza imisebenzi ngokunemba okufanayo ubucwebe e Ukulungiswa ngegolide ed esiliva.
Ngithenga iGolide neSiliva nge-Repair and Sale of Restored Gold items ngamanani amahle
Isikhungo se Ukuhweba Kwegolide e Argento di Catania kuncike ebuchwepheni hhayi i-Erminia Ventura kuphela, umkhandi wegolide onguchwepheshe, kodwa futhi no-Andrea Ventura. Kungumama nendodana ababelana ngentshisekelo efanayo nokunemba maqondana nezwe leubucwebe futhi we ukulinganiswa kwezinto eziyigugu. I izinsimbi eziyigugu zingutshalomali lwekusasa kanye nezinto zobuciko ezenzelwe ukunothisa indlela esiziveza ngayo. Inani elingaphakathi le- oro e esiliva kubenza babe utshalomali oluphephile njalo. Izindandatho, namasongo, imigexo nakho konke okunye okuyigugu kuyindlela enhle yokuzihlobisa nokuzizwa sibalulekile. Lapha kusuka ku- Igolide Elihlanyayo uzothola eziningi Izinto eziyigugu in igolide elibuyiselwe kulabo abafuna ukucebisa iqoqo labo eliyigugu ngamanani angenakuhlulwa.
Ngubani ofuna izinto ku igolide elibuyiselwe ngakho-ke ungaxhumana nesikhungo sethu lapho uzothola khona abasebenzi abafanelekayo abakulungele ukuhlangabezana nokulindela kwakho.
Ikheli: Nge-Pietro Garofalo, 21
I-POSTAL CODE: 95124
Ucingo: 095 325511
Umakhala ekhukhwini: 393 9165617
Umakhala ekhukhwini: 392 2948876
Ifasitela lesitolo: www., ayiweb.com
Iwebhusayithi: www / ayi.it
Inombolo ye-VAT: 05147680879